Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zeGuam Breaking » IGuam ibonelela ngeNkonzo yasimahla yaseGuhan eTrolon eTumon
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba zeGuam Breaking • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Ukwakha kwakhona • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba ezahlukeneyo
Ngomzamo wokuqhubeka nokuvuselelwa kweshishini lokuqala laseGuam, iZiko leeNdwendwe laseGuam (i-GVB) libonelela ngenkonzo yetroli yasimahla kubahlali besiqithi kunye nabakhenkethi eTumon ukusukela nge-30 kaJulayi ukuya ku-Agasti 30, 2021.
IGuam yeeNdwendwe eGuam yamkela iindwendwe zibuye kwaye zoyise ubhubhane.
Inkonzo yetroli yasimahla inikezelwa ngokubambisana nohambo lweLam Lam.
Itroli izakunceda abatyeleli kunye nabantu balapha kunye nemikhosi ukuba ijikeleze isiqithi kwaye ixhase ishishini lendawo.
"Sifuna ukufaka ukuzithemba kumashishini ukuba avule kwakhona njengoko siqala ukwamkela iindwendwe kwaye siphumelele esi sifo," utshilo uMongameli we-GVB kunye ne-CEO uCarl TC Gutierrez. “Ukusebenzisana nohambo lweLam Lam ukubonelela ngezothutho simahla kuya kunika ithuba kubahlali bethu, emkhosini, kunye iindwendwe Ukujikeleza esi siqithi nokuxhasa oosomashishini basekuhlaleni.
Inkonzo yeTrolley yeeNkonzo (GTS) kwi Guam Inikezelwa mihla le ukusuka kwi-9: 30 AM ukuya kwi-7: 00 PM phakathi kwe-GPO kunye neMicronesia Mall ngokuma okuninzi ngaphakathi kweTumon.
Iindlela zeGTS kunye neShedyuli